लघुकथाः सेलाएको सयपत्री
यसपालि भाइटिकाको लागि जसरी भएपनि आउँछु भनेर दिपकले भनेपछि घरमा खुशियाली छायो ।
आँगनमा ढकमक्क फूलेको सयपत्री टिपेर माला गाँस्ने, घरआँगनको सरसफाइ र तिहारका लागि आवश्यक सरसामान किन्ने काम बडो उत्साहले भयो ।
आज दिपकआउने भएकाले चार बजे नै घरका परिवार सबै जना एयरपोर्ट जान हिँडे । समयमै जहाज आयो । तर, दिपक आएन ।
फोन गर्दा स्वीच अफ आइरह्यो । कसैगरी दिपकको खबर थाहा भएन । साँझको समाचारमा दिपकको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको समाचार आयो । केही दिनपछि लास आयो । दिपकको अनुहार नचिनिने थियो । उसले कमाएको पैसा सामान केही आएन । त्योभन्दा बढी घरभरि शोक व्याप्त थियो ।
भाइटिका सकिएको दशौं दिनमा दिपक एक्कासी घर आइपुग्यो । उसले आफ्नो सामान र पैसा चोरी भएको सुनायो ।
त्यसो भए हामीले कसलाई सेलायौ ? थाहा हुन सकेन । हामीले सेलाएको सयपत्री फूल कसको घरको थियो । हामीले थाहा नपाईकनै सेलाएछौं ।
शुक्रबार, ३० असोज, २०७७
‘सुरक्षित नागरिक आवास’ झारो टार्ने कार्यक्रम नबनोस्
कोरोनाको कहरले यतिबेला सवैलाई छोएको छ । कोरोनाको भयले एकातिर पिरोलेको छ भने अर्को तर्फ जनताको आयआर्जनको बाटाहरु पनि खुम्चिएका छन् । हुनेखानेहरु त आर्थिक मन्दिले छोएको बताउँछन् भने हुँदा खानेहरुको अवस्था कहाँ पुगेको होला कस्ले अनुमान गर्ने ? यहि
राज्य नसच्चिएमा विद्रोह हुन्छ
बितेको २४ घण्टामा सामाजिक सञ्जाल र आम रूपमा राज्यप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूको सङ्ख्या निमेषमा बढेर गएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचार सरकारले नगर्ने र बाध्यकारी रूपमा गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि विभिन्न शर्त राखी आमनागरिकलाई राज्य नभएको प्रत्याभूति दिलाउने गरि गरिएको
नरभक्षी सरकार मुर्दावाद !
संसारका घोर अलोकतान्त्रिक, जनविरोधी र तानाशाही सरकारले पनि ओली सरकारले अस्ति गरेजस्तो निर्णय गर्न सक्तैनन् । ओली सरकारको कोभिडसम्बन्धी निर्णय संसारकै सबैभन्दा क्रूर र नरभक्षी तानाशाह राजाको जस्तो लाग्छ । मान्छेको मासु खानेलाई नरभक्षी भनिन्छ । नरभक्षी हुन प्रत्यक्ष मासु
शहरले खोसेको लक्ष्मीका खुसीहरू
मेरो नाम लक्ष्मी हो । जब चार्डपर्वहरु नजकिदै गर्छन्, मेरा ती बालापनका खुसीहरु एकपछि अर्काे गर्दै मानसपटमा ताजा बन्दै जान्छन् । प्रत्येक दसैंमा म आफ्नो बालपन सम्झने गर्दछु । विगतका वर्ष झै २०७७ सालको दसैमा पनि बालापनको खुसीहरु सम्झिरहेको छु